သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း): ဗွီဒီယို
Showing posts with label ဗွီဒီယို. Show all posts
ဘုရားဟောမဟုတ်သည်များကို လုပ်ကြံဟောပြောခြင်းနှင့် အမိန့်ကို နားမထောင်ခြင်းကြောင့် ဦးဝီရသူကိုထောင်ချနိုင်
ဘုရားဟောအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ လုပ်ကြံဟောပြောတာနဲ့ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ရဲ့ အမိန့်ကို နားမထောင်တာတွေကြောင့် ဦးဝီရသူကို ထောင်ချနိုင်တယ်လို့ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာ နာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော် ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တကုမာရဘိဝံသက မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်ပူဇော်တဲ့ ဓမ္မသဘင်မှာ ဟောပြောဖို့ ပုသိမ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဆရာတော်ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တကုမာရဘိဝံသက ပုသိမ်မြို့မှာရှိတဲ့ မီဒီယာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်မိန့်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မဟာအောင်မြေမြို့နယ် မစိုးရိမ်တိုက်သစ်နာယက အဖွဲ့ဝင် ဆရာတော်ဦးဝိစိတ္တာဘိဝံသ(ဦးဝီရသူ)အနေနဲ့ ဒေသအနှံ့မှာ ဟောပြောခဲ့တာတွေအတွက် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့က (၂၀၁၇)ခုနှစ် မတ်လ(၁၀)ရက်နေ့က စတင်ကာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း တရားဟောပြောခွင့်တစ်နှစ်ပိတ်ပင် ထားခဲ့တာပါ။
အဲဒီလိုတရားဟောပြောခွင့် ပိတ်ပင်ထားတာကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက တည်ဆဲဥပဒေတွေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားဖို့ မတ်လ(၁၀)ရက် ရက်စွဲနဲ့ နိုင်ငံတော်သံဃ မဟာနာယကအဖွဲ့က အမိန့်စာထုတ်ပြန်ထားတာပါ။
နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ရဲ့ အမိန့်စာ ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်တစ်နေ့ မတ်လ(၁၁)ရက်မှာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အိမ်မဲမြို့နယ် သရက်ကုန်းသီးကွင်း ကျေးရွာအုပ်စုမှာ တရားဟောပြောခွင့်ပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့ ဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တာဘိဝံသ(ဦးဝီရသူ)က ပါးစပ်ကို ပလာစတာပိတ်ပြီး တရားခွေဖွင့်တဲ့တရားပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
တခြားဘာသာကို မထိခိုက်ဖို့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးမေတ္တာဂရုဏာထားနေကြဖို့ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ပြန်တမ်းတွေထုတ်ထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့လည့်း နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော်ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တကုမာရဘိဝံသက မိန့်ကြားပါတယ်။
အမျိုးဘာသာစောင့်ရှောက်တာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာသာခြားတွေနဲ့အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ရင်လည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဘာသာကိုယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုးကွယ်တာက အမျိုးဘာသာကို စောင့်ရှောက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်း နိုင်ငံတော်သံဃ မဟာနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တကုမာရဘိဝံသက မိန့်ကြားပါတယ်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မဟာအောင်မြေမြို့နယ် မစိုးရိမ်တိုက်သစ်နာယကအဖွဲ့ဝင် ဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တာဘိဝံသ (ဦးဝီရသူ)က တရားဟောပြောခွင့်ပိတ်ပင်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ပါးစပ်တိပ်ပိတ် တရားပွဲတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မတ်လ(၂၇)ရက် ညပိုင်းမှာတော့ ကော့မှူးမြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ပုသိမ်ဗျူရိုက စိုးသိမ်း ပေးပို့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးခုံချင်းဆက် အမွှာကလေးငယ်နှစ်ဦးအား ခွဲစိတ်ကုသမှုပြုလုပ် (ရုပ်/သံ)
မတ် - ၂၃ ရိုက်ကူး - ကိုနိုင်
မန္တလေးမြို့ရှိ ကုတင်(၅၅၀)ကလေးဆေးရုံကြီးတွင် မတ်လ ၂၃ နေ့ နံနက် ၉ နာရီ မှစ၍ ဆီးခုံချင်းဆက် အမွှာကလေးငယ်နှစ်ဦးအား ခွဲစိတ်ကုသမှုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ခွဲစိတ်ကုသမှုမှာ ၁၄ နာရီခန့်ကြာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည် ။
ကလေးငယ်နှစ်ဦးကို မုံရွာမြို့နယ် ညောင်ပင်သာကျေးရွာတွင် နေထိုင်သည့် ကိုညိမ်း ဒေါ်မာလာစန်းတို့က ၂၀၁၆နှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၃)ရက် နံနက် (၁၀) နာရီက မုံရွာဆေးရုံကြီးတွင် မွေးဖွားခဲ့သည် ။
ဦးကိုနီကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သည့် CCTV ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း ရန်ကုန် (Myanmar Now)—ဇန်န၀ါရီ ၂၉ ရက် ညနေ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် ကလေးငယ်တစ်ဦးကို ပွေ.ချီလျက် ဟိုဒီငေးမောနေသော ဦးကိုနီအား လူသတ်သမားဦးကြည်လင်းက တစ်လှမ်းခြင်းနောက်မှကပ်လိုက်လာပြီး နှစ်စက္ကန့်မျှသာကြာသော အချိန်အတောအတွင်း ဦးကိုနီ၏နောက်စေ့ကို သေနတ်ဖြင့်တေ့ချိန်ပြီး မိမိရရပစ်ချလိုက်သည်။ ကျောပိုးအိတ်လွယ်ထားသော ဦးကိုနီသည် သမံတလင်းပေါ်တွင် နောက်လှန်လဲကျသွားသဖြင့် သူ၏မြေးငယ်မှာ တစ်စုံတစ်ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်ချက်တည်းသော သေနတ်သံထွက်ပေါ်ပြီး ဦးကြည်လင်းက သူ၏ညာလက်ကို ဆန့်တန်းလျက် အနေအထားဖြင့် ထွက်ပြေးလေသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားရာတွင်ရှိနေသော လူတစ်ချို.ထိတ်လန့်ထွက်ပြေးကြသော်လည်း အမျိုးသားတစ်ဦးက ပုဆိုးပြင်ဝတ်လျက်အနေအထားဖြင့်ပင် လက်ဗလာဖြင့် လူသတ်သမားထံ ထပ်ချပ်မကွာလုိုက်သွားခဲ့သည်။
Myanmar Now ကရရှိထားသော ယခုဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာ ထိုပစ်ခတ်မှုအား ဖမ်းယူရရှိခဲ့သော လေဆိပ် CCTV မှတ်တမ်းထဲမှ အပိုင်းအစတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ လေဆိပ် CCTV မှတ်တမ်းများတွင် သင်္ကာမကင်းဖြစ်ဖွယ်ရာကောင်းသော လူအချို.အား ရဲတပ်ဖွဲ.ကအလိုရှိလျက်ရှိသော်လည်း ၄င်းတို့၏ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများအား သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက ယခုတိုင် လျှို.၀ှက်ထားဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ထိုနေ့က လေဆိပ် CCTV မှတ်တမ်းတွင် တွေ.ရသော ဒုဗိုလ်မှုးကြီးဟောင်း အောင်ဝင်းခိုင်သည် ဇန်န၀ါရီ ၃၀ ရက် ညနေတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဥပါတသန္တိစေတီအနီးတ၀ိုက် ပျောက်ဆုံးတိမ်းရှောင်သွားကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဦးကိုနီကို လုပ်ကြံသူဟာ မန္တလေးသား မဟုတ်ဘူးလို့ ဆို (ရုပ်/သံ)
ဦးကိုနီကို လုပ်ကြံသူဟာ မန္တလေးသား မဟုတ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီးဟန်ထွန်းပြော။
ဦကိုနီ သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ခံခဲ့ရမှုဟာ နိုင်ငံရေး လုပ်ကြံမှု ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဦးဝင်းထိန် ပြော (ရုပ်/သံ)
NLD ပါတီရဲ့ ဥပဒေရေးရာ အကြံပေး ဦကိုနီ သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ခံခဲ့ရမှုဟာ နိုင်ငံရေး လုပ်ကြံမှု ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးဝင်းထိန်က ပြောပါတယ်။ ဦးကိုနီဟာ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ရေး၊ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ရေးတွေမှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းလည်း ဦးဝင်းထိန်က အခုလို ပြောထားပါတယ်။
ဦးကိုနီရဲ့ သမီးဖြစ်သူက ပြန်ပြောပြ (ရုပ်/သံ) လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ NLD ဥပဒေအကြံပေး ဦးကိုနီရဲ့သမီး ဒေါ်ယဉ်နွယ်ခိုင်ဟာ သူ့ဖခင်ကို လေဆိပ်ကို သွားကြိုခဲ့သူပါ။ ပစ်သတ်ခံရချိန်မှာ ဦးကိုနီဟာ သူ့မြေးလေးကို ပွေ့ချီထားပါတယ်။ ဒေါ်ယဉ်နွယ်ခိုင်က သူမြင်တွေ့ရတာကို အခုလို ပြောပြထားပါတယ်။
ရှေ့နေ ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လေဆိပ်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ မျက်မြင်တက္ကဆီသမားတွေရဲ့ ပြောပြချက် (ရုပ်/သံ)
ရှေ့နေ ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လေဆိပ်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ မျက်မြင်တက္ကဆီသမားတွေရဲ့ ပြောပြချက်။
သိမ်ဖြူ မီးရထား ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ မီးလောင် (ရုပ်/သံ)
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ သိမ်ဖြူမီးရထားရပ်ကွက်၊ ဦးဖိုးကြားလမ်းအနီးက မီးရထားဝန်ထမ်းလိုင်းခန်းမှာ ဒီနေ့ည ၁၀ နာရီခန့်က မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး မီးလောင်ကျွမ်းမှုကို level2အဆင့်နဲ့ သတ်မှတ်ငြိမ်းသတ်ခဲ့ရပါတယ်။
လက်ရှိမီးထိန်းနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်း ၁၈ ခန်းလောက် မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ အကြမ်းမျဉ်းသိရပြီး ဘယ်လိုလောင်တယ်ဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး။
ရိုက်ကူး - ကောင်းထက်ကျော်၊ ထက်အာကာ၊ သန့်ဇင်ဦး/RFA
ပယောဂဆရာ ထွန်းနိုင် ကလေးသုံးဦး သတ်မှု တွံတေးတရားရုံးမှာ ၀န်ခံ
တွံတေးမြို့နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ ကလေး (၃)ဦး ကို စိတ်လွတ်ပြီး သတ်ဖြတ်ခဲ့မိ ကြောင်း ပယောဂဆရာ က နိုဝင်ဘာလ (၁၈)ရက် သောကြာနေ့ တရားရုံး ကြားနာမှုမှာ ၀န်ခံ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အသက် (၃၂)နှစ်အရွယ် ပယောဂဆရာထွန်းနိုင်ကို လူသတ်မှု၊ အလောင်းဖျောက်ဖျက်မှု၊ နာကျင်စေမှု စတဲ့ ပုဒ်မတွေနဲ့ တွံတေးတရားရုံးမှာ ကြားနာစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
အေပီသတင်းကို အခြေခံပြီး မအင်ကြင်းနိုင်က တင်ဆက်ထားပါတယ်။
စပိန်နိုင်ငံ ထိပ်တန်း နွားရိုင်းသတ်သမား နွားရိုင်း တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံး (ရုပ်/သံ)
UPDATED: 11:30, Sun, Jul 10, 2016
စပိန်နိုင်ငံက ထိန်တမ်း နွားရိုင်သတ်သမား ဗစ်တာ ဘာရို Victor Barrio အသက် (၂၉) နှစ် ဟာ နွားရိုင်း သတ်ပွဲတော် အတွင်းမှာ-လိုရမ်ဇို (နွားအမည်) Lorenzo ဦးချိုနဲ့ထိုးကော်လိုက်တဲ့ ဒဏ်ရာနဲ့ဆေးရုံကို အရေးပေါ်တင်ခဲ့ ရပြီး ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဗစ်တာ (၉) နှစ်သားကတဲက နွားရိုင်းတွေနဲ့ကစားလာသူဖြစ်ပါတယ်။ TV ကနေ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ ကွင်းလည်နွားရိုင်းသတ်ပွဲကို စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပါ လာရောက်ကြည့်ရူ့ ကြောင်းသိရပါတယ်။
ကွင်းလယ်ခေါင်မှာ နွားရိုင်းတိုက်ခိုက်တာကို ရှောင်တိမ်းရင်းနဲ့နွားကိုသေတဲ့ အထိ မှိန်း တန်နဲ့ထိုးသတ်စကားနည်းဟာ ကမ္ဘာကျော် စပိန်ရိုးရား ပွဲတော် တခုဖြစ်ပါတယ်။
နွားရိုင်းတွေကို သွေးသံရဲရဲနဲ့ ညှင်းဆဲသတ်ဖြတ်တာတွေ မြို့ တွင်းမှာ နွားရိုင်းကိုလွတ်ပြီး လူတွေကို လိုက်တိုက် ခိုက် တဲ့ ကစားနည်းတွေကို မလုပ်ကြဖို့ ကို ဆန္ဒပြကန့် ကွက်နေတာတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ မိန့်ခွန်းအကျဉ်း (ရုပ်/သံ)
အကျီဆင်တူတွေတွေ့တယ် အလုပ်တူတူပဲလား အပြင်ကလူတွေကို ပေးမ၀င်ရင် အပြင်ထွက်ပြောမယ်။ ကျမတို့ရဲ့ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများရဲ့ ကလေးတွေအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး လိုအပ်တဲ့ အထောက်အထား စာရွက်စာတန်းမျာူရဖို့ စီစဉ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် ။ တန်းတူညီတူ လခ ရဖို့ဆိုတာဟာ လုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ်မှာတည်ပါတယ်။ အားလုံးက နေပြီး ဥပဒေဘောင်အတွင်းက လုပ်ဖို့ ကျမတို့ညွိပါမယ်။ သံရုံးက တဆင့် ကျမ တို့နိုင်ငံက အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကွင်းဆင်းပြီး ကျမ တို့ အလုပ်သမားတွေရှိတဲ့နေရာမှာလေ့လာပြီး ထုတ်ပေးသင့်တဲ့စာရွက်စာတန်းတွေ ထုတ်ပေးပြီး ရသင့်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကို ကာကွယ်ဖို့ တိုးမြှင့်ဖို့ ကျမ တို့အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်။
ထိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်းက ကျားတွေ တောထဲ ရွှေ့ (ရုပ်/သံ)
ထိုင်းနိုင်ငံ ကန်ချနဘူရီပြည်နယ်က ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းထဲမှာ ရှိနေကြတဲ့ ကျားပေါင်း ၁၃၇ ကောင်ကို ဖယ်ရှားပြီး အနီးက ဘေးမဲ့တောကို ပြောင်းရွေ့ဖို့ သဘာဝသားရိုင်း တိရစ္ဆာန်ရေးရာ အာဏာပိုင်တွေက ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ အဲဒီ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို ခရီးသွားတွေ အလာများကြပြီး တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၅ သန်းလောက် ဝင်ငွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိရစ္ဆာန်အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေ ကတော့ အဲဒီ ကျောင်းမှာ ကျားတွေကို ကောင်းကောင်း မထားဘဲ တိရစ္ဆာန်ထွက် ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ စွပ်စွဲ နေကြပါတယ်။
ကျောက်မဲမြို့နယ်က မီးရှို့ခံထားရတဲ့အလောင်းများ (ရုပ်/သံ)
ရှမ်းပြည်မြောက်က်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ်မှာ အစိုးရတပ်နဲ့ SSPP/SSA အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း၊ ပန်လော့နဲ့ ဝိုးလုံကျေးရွာမှာ မီးရှို့ခံထားရတဲ့ အလောင်းတွေ တွေရှိခဲ့တဲ့အတွက် ရွာသားတွေက ကျောက်မဲမြို့က SNLD ပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုကံသာက တင်ပြထားပါတယ်။
မန္တလေး ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် စက်မူ (၂)မှ မီးအကြီးအကျယ် လောင်ကျွမ်းနေ (ရုပ်/သံ)
မန္တလေး ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် စက်မူ (2) 49x50လမ်း တွင် 22.5.2016 . 1:40pm အချိန်ခန့်က လောင်ကျွမ်းနေသော မီးလောင်မှုမှတ်တမ်းဗီဒီယိုဖိုင် (မီးလောင်မှုအဆင့် Level4)။
video credit : nyi nyi win
၂ဝ၁၆ ခုနှစ် သတ္တမအကြိမ်မြောက် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုပေးပွဲ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု (ရုပ်/သံ)
၂ဝ၁၆ ခုနှစ် သတ္တမအကြိမ်မြောက် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရွေးချယ်ရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် အမှတ် (၂)
ရက်စွဲ - ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် မေလ ၁၅ ရက်
၂ဝ၁၆ ခုနှစ် သတ္တမအကြိမ်မြောက် ဂုဏ်ပြုပွဲအတွက် ၂ဝ၁၆ ခု ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့အထိ လက်ခံ ရရှိသော အမည်စာရင်းဝင်များကို ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း၏ အခြေခံမူများနှင့် စိစစ်ပြီး ဆုရွေးချယ်ရေး အဆင့်များဖြင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အသင်းအနေဖြင့် သတ္တမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် တစ်ဦးနှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့က ရွေးချယ်ပေးအပ်သည့် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် အထူးဆုရှင် ၃ ဦးတို့ကို ရွေးချယ်ပြီးစီးပြီဖြစ်ပြီး အဆိုပါဆုရှင်များအမည်များကို မေလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ဆုပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ကြေညာမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။
ဆုရှင်များကို ဆုတံဆိပ်နှင့်အတူ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုအတွက် ဒေါ်လာတစ်သောင်း၊ အထူးဆုရှင် များအတွက် ဒေါ်လာ တစ်ထောင်စီ ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သတ္တမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မေရီလန်း ပြည်နယ်ရှိ Shady Grove Middle School (8100 Midcounty Hwy, Gaithersburg, MD 20877) တွင် မေလ ၂၁ ရက် ညနေ ၆ နာရီမှ ည ၁ဝ နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပြီး အခမ်းအနားကို အင်တာ နက်မှ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် စီစဉ်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ (ဆုပေးပွဲ ဖိတ်စာကို ယခု ကြေညာချက်နှင့် အတူ ပူးတွဲပေးပို့ထားပါသည်။)
ဆက်သွယ်ရန် ။ ။ 415-531-3761 ( အခမဲ့ Viber ဖြင့်လည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။)
Putin မှ ရုရှားလိုပြောပြီး သမ္မတ ဦးထင်ကျော်မှ English language ဖြင့် ပြန်လည်ပြောဆိုတဲ့ (ရုပ်/သံ)
တာချီလိတ်တွင် ဦးခေါင်းမဲ့ ကလေးတစ်ဦးပါသည့် အမွှာကလေး မွေးဖွား
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) တာချီလိတ်ခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ဧပြီလ (၂၆)ရက်နေ့ ညနေ(၃)နာရီခွဲ အချိန်က ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး အမွှာမွေး...
မပြန်ရဲ၍ လိုက်ပို့သူကို ဦးခေါင်းပြတ်အောင် ဝါးခုတ်ဓားမဖြင့် ခုတ်သတ်
တိုက်ကြီး ဧပြီ ၂၈ တိုက်ကြီးမြို့နယ် ဥက္ကံမြို့ ချောင်းစောက်ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါ်စီဖိုးအင်းစုတွင် ဧပြီလ၂၇ ရက်နေ့ နံနက် ၇ နာရီခန့်က လူသတ်မှုဖြစ...
မျက်နှာဖုံးနှင့်လူနှစ်ဦးမှ ရွှေ၊ ငွေတောင်းရာ ဟန့်တားခဲ့သည့်အမျိုးသမီး ဓါးဖြင့်ခုတ်သတ်ခံရ
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ် အိုးဖောက်ကျေးရွာတွင် ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့ ညဉ့် ၁ နာရီအချိန်က မျက်နှာဖုံးနှင့်လူနှစ်ဦးမှ အိမ်ထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီ...
ဘန်ကောက်သို့ လာရောက်သည့် မော်ဒယ်တဦးအား အငှားယာဉ်မောင်းသမားက မုဒိန်းကျင့်
၂၇-၄-၂၀၁၇ ဧပြီလ (၂၆)ရက်နေ့ က ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်ကို ရောက်လာတဲ့ ဘရားဇီး နိုင်ငံသူ မော်ဒယ်ဟာ ဒိုမောင်းလေဆိပ်ကနေ အ၀ါရောင် အငှားယာဉ်နဲ့ ...
မုံရွာ၊ ဧပြီ ၂၇ လမ်းသွားလမ်းလာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့ ယောင်္ကျားလေးတစ်ဦးက ရုပ်ရှင်ထဲကလို အချစ်ဓားပြတိုက်ဖို့အတွက် လက်ဆွဲ ...
၂၄-၄-၂၀၁၇ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသ ချင်းမိုင်ခရိုင် စံကမ်ဖလ် မြို့ နယ်(၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ယင်လပ် ဇာတိမြို့)မှာ နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကြ...
ဆရာလေးတစ်ပါးကို ဆိုင်ကယ်ကတိုက်မိပြီး သေဆုံးပျံတော်မူ
ယနေ့(၂၅-၄-၁၇)နေ့မှာ စစ်ကိုင်းမြို့ကျော် ထက်ကွေ့အနီးမှာ ဆရာလေးတစ်ပါးကို ဆိုင်ကယ်ကတိုက်မိပြီး သေဆုံးပျံတော်မူ သွားပါတယ်။ မထေရဝတီ အသက်(၃၃)...
ချောင်းဦးမြို့နှင့် အရာတော်မြို့နယ်တွင် စကားများရာမှ လူသေဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ချောင်းဦးမြို့နဲ့ အရာတော်မြို့နယ်တို့မှာ စကားများရာမှ လူသေဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ ချောင်းဦးနဲ့ အရာတော်မြို့မရဲစခ...
ရှေးဟောင်းဒင်္ဂါးပြားများရရှိသူ အမျိုးသမီးအား ပြည်နယ်အစိုးရမှ ကျပ်ငွေ ၁၂ သိန်းချီးမြှင့်
ရခိုင်ဂေဇက်၊ ဧပြီ ၂၇ ကျောက်ဖြူခရိုင် စနဲမြို့မှ ရှေးဟောင်းဒင်္ဂါးပြားများရရှိသူ အမျိုးသမီးအား ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ကျပ်ငွေ ၁၂ သိန်း ပေးအပ...
( နောင်ချိုမြို့နယ်တရားရုံးကို ဒီကနေ့ လာရောက်ခဲ့သည့်တောင်သူများကိုတွေ့ရစဉ် ) Photo: Myo Win Upper Myanmar Facebook ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပို...